Terms sy Conditions ny fifaninanana- Mandresy ny Smartphone |
Fisondrotana io dia hihazakazaka amin'ny 00:01 1St Desambra 2016 mandra- 23:59 7faha Desambra 2016 (GMT).
The “mpandresy” ny fifaninanana dia ho ny ambony 3 mpilalao izay manana ny ambony indrindra wagering vola tanteraka ny fampahafantarana manerana fotoana slot rehetra lalao.
**Manerana ny tambajotra, 3 ambony fifanintsanana mpilalao dia hahazo ny Smartphone (ka ny £ 800 dia ahitana ny fanaterana izany anjara-raharaha)
Mariho tsara entana izay efa nilaza tamin'ny fotoana ny fampiroboroboana, Mety ho Tsy vonona ka noho izany, fitantanana dia manan-jo mitovy manolo amin'ny entana tao akaiky indrindra araka ny voalazan'ny vidin miisa ny ilaina ny £ 800.
Players izay efa nampahafantarina ny Email na Telephone, hanana 7 andro mba namaly ny Casino raha te hanaiky ny Smartphone na Cash mitovy.
tokony ny 3 mpandresy mifidy ny vola mitovy amin'ny 70% ny lanjan'ny ny fanomezana (£ 560 vola) izany dia voalaza any an-mpilalao tantara ao 7 andro fiasana avy mampahafantatra ny mpilalao. Izany dia tsy hiharan'ny ny wagering fepetra.
1St – 3RD toerana ** Smartphone
4faha – 13faha-toerana dia handray ny £ 50 Bonus
Cash sy ny tombony loka dia afaka mitondra any 7 andro fiasana mba nisaina ny tantara. The Smartphone, miankina amin'ny fisian'ny dia afaka mitondra ny 28days hamonjy.
General Fepetra mampihatra. Management ny fanapahan-kevitry ny farany amin'ny rehetra, toe-javatra.
Fepetra – 100% Ampifandraiso hatramin'ny £ 250
Terms sy Conditions Fidio ny Match